Iipilisi ezintlanu eziphezulu ezineeprosesa eziphambili ze-octa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iipilisi ezintlanu eziphezulu ezineeprosesa eziphambili ze-octa
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, iiprosesa eziphathwayo zihambile kuyilo olunye-olusisiseko loyilo olumbini-olusisiseko, kutsha nje kuyilo lwe-quad-core, kwaye ngoku nakwi-octa-core yoyilo. Ngelixa amandla aluhlaza okusingathwa kwesiseko esinye yeyona nto ibaluleke kakhulu ekunikezeleni olona luvo lomsebenzisi lubalaseleyo, kukho iimeko xa ii-cores ezingaphezulu zisebenza ngokulinganayo. Nangona ukusetyenziswa kweeprosesa eziphambili ze-octa kwii-smartphones kunye neetafile kusenokuxoxwa, inani elonyukayo labathengi ngoku lijonge ukuthenga izixhobo ezinamacore amaninzi kangangoko.
Unoko engqondweni, & nathi sigqibe kwelokuba lixesha lokuba siqokelele uluhlu lwewona macwecwe mabalaseleyo kunye neeprosesa eziphambili ze-octa. Into enomdla kukuba, ngelixa Iifowuni ze-octa-core zininzi noko, kuphela ngabavelisi beethebhulethi abambalwa abaye bagqiba kwelokuba bahende abathengi beepilisi ngeeprosesa eziphambili ze-octa, okunomdla kakhulu kunikwa ukuba iipilisi zezona zixhobo zefowuni ezilungele umsebenzi wokuvelisa kunye nokuqhekeka kwamanani amakhulu. Ngapha koko, kufuneka siqaphele ukuba zonke iipilisi ze-octa-core ezikhoyo ngoku kwi-Android.
I-Samsung Galaxy Tab S 8.4
Ukukhahlela uluhlu lwethu lwamacwecwe aneeprosesa ze-octa-core, makhe sithethe malunga ne-Samsung Galaxy Tab S 8.4, ngokuqinisekileyo yeyona tablet iphakathi ye-Android ekumgangatho ophakathi enokuthengwa yimali ngoku. I-Tab S 8.4 isekwe kwi-Exynos 5 Octa, i-chip yeselfowuni ephuculwe ngaphakathi endlini yi-Samsung edibanisa iprosesa ye-octa-core enezinto ezine ezisebenza ngamandla ze-ARM Cortex-A7 cores ezivaliweyo kwi-1.3GHz kunye nokusebenza okuphezulu okune. I-ARM Cortex-A15 cores evalelwe kwi-1.9GHz. Kuxhomekeke kwimeko yemeko yokusetyenziswa, ithebhulethi iya kuhamba elinye okanye elinye iqela eliphambili. Oku kunokwenzeka ngenxa yetekhnoloji ye-ARM ebizwa ngokuba yi-Big.
Uthotho lweGalaxy Tab S lwasungulwa nge-Android 4.4 KitKat, kodwa iimodeli ze-Wi-Fi kuphela zihlaziyiwe kwi-Android 5.0 Lollipop okwangoku.
Qaphela ukuba yinguqulelo ye-Wi-Fi kuphela yeTab S 8.4 eza neprosesa ye-octa-core, inguqulelo ye-LTE ixhotyiswa yiprosesa ye-quad-core eboniswe yi-chip yeQualcomm Snapdragon 800.
Ngaphandle kwe-Exynos 5 Octa, i-Galaxy Tab S 8.4 iza nembonakalo eqaqambileyo necacileyo ye-8.4-intshi Super AMOLED ngesisombululo se-1600 nge-2560 pixels, i-3GB ye-RAM, nokuba yi-16GB okanye i-32GB yendawo ehlanganisiweyo yokugcina, ikhadi le-microSD slot, ikhamera ephambili ye-8MP, ikhamera yesibini ye-2MP kunye nebhetri engama-4900 mAh. Ngolwazi oluthe kratya, funda eyethu Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Tab S 8.4 .
I-Wi-Fi kuphela ye-Samsung Galaxy Tab S 8.4 ene-16GB yokugcina ehlanganisiweyo Ixabiso le- $ 399 eAmazon .
I-Samsung Galaxy Tab S 10.5
Ukuba u-8.4-intshi uguqulelo lweGalaxy Tab S ikushiya ufuna indawo engaphezulu yesikrini se-Super AMOLED, emva koko inguqulelo ye-10.5-intshi mhlawumbi yithebhulethi ye-octa-core oyifunayo. Njengomntakwabo omncinci, i-Samsung Galaxy Tab S 10.5 isekwe kwi-Exynos 5 Octa, iza ne-3GB ye-RAM, ikhamera ephambili ye-8MP, kunye nekhamera yesibini ye-2.1MP. Ukwenza umlinganiso wamandla aphezulu womboniso omkhulu, iSamsung ifakelwe ibhetri enkulu ye-7900 mAh. Ngolwazi oluthe kratya kwithebhulethi, yiya ngentloko ngokupheleleyo Ukuhlaziywa kweGalaxy Tab S 10.5 .
I-Wi-Fi kuphela ye-Samsung Galaxy Tab S 10.5 ene-16GB yokugcina kwangaphakathi Ixabiso le- $ 479 eAmazon .
I-Samsung Galaxy Qaphela 10.1 (2014)
Emuva xa yayisungulwa ngo-Okthobha u-2013, i-3G kunye ne-Wi-Fi kuphela iinguqulelo ze-Samsung Galaxy Qaphela 10.1 (2014) yayizipilisi zokuqala ze-octa-core emhlabeni. Iprosesa ikwayiloo Exynos 5 Octa onokuyifumana ngaphakathi kwiinguqulelo ze-8.4 kunye ne-10.5 ze-Samsung Galaxy Tab S, okuthetha ukuba abathengi bafumana ii-arm ezine ze-Cortex-A15 cores ezivaliweyo kwi-1.9GHz, kunye nee-cores ezine ze-ARM Cortex-A7 ezivaliweyo kwi-1.3GHz. I-Exynos 5 Octa ibhangqiwe nge-3GB ye-RAM.
Inqaku 10.1 2014 elisungulwe nge-Android 4.3 ebhodini, kodwa sele ihlaziywa kwi-Android 4.4 KitKat.
Ezinye izinto zibandakanya i-3GB ye-RAM, ipaneli ye-LCD eyi-10.1-intshi ngesisombululo se-1600 nge-2560 pixels eziza nenkxaso yesitayile, i-16GB / 32GB / 64GB yokhetho lwangaphakathi lokugcina, ikhadi le-microSD slot, ikhamera ephambili ye-8MP, kunye ne-2MP shooter yesibini. Zonke ezi zinto zixhotyiswe ngebhetri ye-8220mAh. Funda nzulu malunga neli cwecwe ngokufunda ngokupheleleyo Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy Note 10.1 .
Inguqulelo ye-Wi-Fi kuphela ye-Samsung Galaxy Qaphela 10.1 ene-16GB yogcino lwangaphakathi Ixabiso le- $ 494.99 eAmazon .
Ithebhulethi yakwaSony Xperia Z4
Ukuqhubela phambili kwiipilisi ezivela kwabanye abenzi, iThebhulethi ye-Sony Xperia Z4 ifanelwe indawo kuluhlu lwethu. Okwangoku, ithebhulethi yakwa-Sony Xperia Z4 kuphela kwethebhulethi eza ne-chipset ye-Snapdragon 810, eyi-chip efanayo ne-apos; ekufumaneni amandla e-flagship njenge-HTC One M9. I-Snapdragon 810 iza namandla amane asebenzayo e-ARM Cortex-A53 cores egcinwe kwi-1.5GHz, kunye neezine ezine ezongezelelweyo zokwenza umsebenzi ophezulu we-ARM Cortex-A57 cores evalelwe kwi-2.0GHz. Ngokwezibonakaliso, iThebhulethi ye-Sony Xperia Z4 yenye yeepilisi ezikhawulezayo ezikhoyo ngoku. Ithebhulethi yakwaSony Xperia Z4 iqhuba i-Android 5.0 Lollipop.
Ngaphandle kwento yeQualcomm Snapdragon 810 chip, ithebhulethi ye-Sony Xperia Z4 iza ne-3GB ye-RAM, 32GB yendawo yokugcina ehlanganisiweyo, ikhadi le-microSD slot, unxibelelwano lwe-LTE olukhethiweyo, ikhamera yokuqala ye-8.1MP kunye nekhamera yesibini ye-5.1MP. Umboniso yiphaneli yodidi lwe-IPS-10.1-intshi eqhuba nge-1600 nge-2560 pixels. Zonke ezi zinto zixhaswayo zixhotyiswe ngebhetri ye-6000mAh. Nangona enye yezona pilisi zikhawulezayo ukujikeleza, i-Xperia Z4 yeCwecwe ikwachukumisa uyilo lwayo: kwi-6.1mm nje ubukhulu, i-Xperia Z4 yeCwecwe lelona cwecwe lincinci le-octa-core oliza kuyifumana, kunye ne-IP68 uthuli oluqinisekisiweyo kunye nokungena kwamanzi. Ukuba ujonge ukusebenzisa i-Z4 yeCwecwe lomsebenzi wemveliso, uSony ukwabonelela ngedokhibhodi.
Ithebhulethi yakwaSony Xperia Z4 ayifumaneki okwangoku ukuba ithengwe eMelika. EYurophu, amaxabiso oku-oda kwangaphambili aqala malunga ne- € 559 ​​yemodeli ye-Wi-Fi ngaphandle kwebhodibhodi ye-Bluetooth.
I-Sony Xperia Z4
Cube Ukuthetha 9X
Nangona onke amacwecwe amane angaphambili akhankanywe apha ngasentla eza, kwithiyori, kunye neeprosesa eziphambili ze-octa, wena & apos; uqaphele ukuba kukho ii-cores ezine ezikhawulezayo kunye neine cores ezingenamandla. Ngamanye amagama, unokucinga ngezi processor zangaphakathi ze-octa njengeeprosesa ezimbini zecad-core ezisebenza kunye ukwenza imisebenzi ngokuxhomekeke kwinqanaba lokusebenza. Olu tshintsho nge-Cube Talk 9X, i-iPad Air clone enikwe amandla yiMediaTek & apos; MTK8392, inyani ye-octa-core chip edibanisa ii-co-ARM ezisibhozo ze-Cortex-A7 ezivaliweyo kwi-2GHz.
Ezinye izinto zibandakanya umboniso we-IPS we-9.7-intshi ngesisombululo se-1536 nge-2048 pixels, i-2GB ye-RAM, nokuba yi-16GB okanye i-32GB yokugcinwa kwangaphakathi, ikhadi le-microSD slot, uqhagamshelo lwe-3G, ikhamera ephambili ye-8MP, inzwa yesibini ye-2MP, kunye enkulu ibhetri eyi-10000mAh. I-Cube Talk 9X iqhuba i-Android 4.4 KitKat.
Ngelixa amacwecwe amane angaphambili efumaneka ngokubanzi eMelika naseYurophu, iCube Talk 9X yithebhulethi yaseTshayina oya kuthi ungenise ngaphakathi kuyo. Amaxabiso aqala ngo malunga ne- $ 170 yemodeli ye-16GB .
Ipad yomoya 2 ukujongana kwithagethi
Isikhumbuzo ngemini yeselfowuni
Qaphela i-10 vs inqaku 20
Ukuvavanya iMicroservices-Isikhokelo saBaqalayo
Umculo ku-YouTube ulapha; Uvavanyo lwasimahla lweentsuku ezili-14 ngoku luyafumaneka kubasebenzisi be-Android kunye ne-iOS
I-Apple iPad 8th Gen Unboxing
Imicimbi yeFitbit emnyama yangoLwesihlanu iphumile: gcina enkulu kwiFitbit Charge HR, Charge, Flex kunye neNye
Ukuvavanywa kukaGoogle kwiscreen se-UI yemephu yesitalato yokujonga kwi-Android